Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Norrbottens län / Kiruna
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 19 10 2021
20,553 kiilomitir oo laba jibaaran
Gällivare 122 kiilomitir
Luleå 343 kiilomitir
Skellefteå 464 kiilomitir
Iyadoo ay sabab u tahay xaaladda dhaqaale ee aadka u sarreysa iyo isbaddalka magaalada way weyntahay gabaabsiga guryaha oo dadka dalka ku cusub badankooda waxay hoygooda ugu horreeya ka helaan tuulooyinka Svappavaara och Vittangi. Masaafada uu dhaxeeyso Kiruna iyo Svappavaara waa 40 kiilomitir oo Vittangi waxay u jirtaa qiyaastii 70 kiilomitir. Si loo helo warbixin dheeraad ah kuna saabsan hoyga iyo si aad isaga diiwaan geliso safka guryaha, booqo bogga intarnatka ee Kirunabostäder.
Gudaha Kiruna ilaa iyo markii ay dhalatay magaaladan waxaa lagaga hadlaa Iswiidhish, Saami iyo Finlaandiiska Torne. Dhowr ka mid ah luuqadaha ugu waaweyn ee dadka dhawaan u soo guuray waa Daari, Faarsi, Soomaali, Tigrinya, Amxaari, Ingiriisi, Ruush iyo Taylaandiis.
Kiruna waxay leedahay wakhti saf oo runtii aad u dheer (qiyaatstii 6 bilood) dhinaca xannaannada carruurta laakiin dhinaca tuulooyinka Svappavaara iyo Vittangi wakhtiga safku wuu ka gaabanyahay. Xannaannada carruurtu waxay haysaa tayo macallinimo oo sare lehna hab gaar u ah dadka dalka ku cusub, haddii loo baahdo waxaa shaqaale loo qabtaa si carruurta dalka ku cusub ay u helaan taageerada ay u baahanyihiin. Warbixin dheeraad ah oo ku saabsan xannaannada carruurta iyo dugsiyada hoose-dhexe waxaad ka helaysaa degmada boggeeda intarnatka.
Xarunta waxbarashada Lappland waxeey ka shaqeeyaan waxbarasho ku xiran sida ee dadka waa weeyn uu soo dalbadeen, waxeeyna taasi kala socotaa ayadoo wada hadal dhaw lala yeesha jawiga-shaqada ee gobolka iyo wadashaqeeynta shirkadaha iyo hey'addaha oo lagal wadashaqeeyo qorsheeynta iyo gudogalinta waxbarashada. Xarunta-waxbarshada waxeey qabqaabisaa waxbarasho loogu tala galay dadka waa weeyn ee asaasiga iyo gaarka ah, SFI, dugsiga sare iyo heerka waxbarashada shaqada ee sare. Waxa ee soo bandhigaan waxaa ka mid ah waxbarshada xanaaneeynta, waxbarashada dadka waa weeyn ee shaqada oo leh iswiidhishka-shaqada oo loo habooneeysiiyaya dadka dalka ku cusub iyo waxbarasho badan oo ku socoto baahida warshada godka macdanta lagala soo baxo. Waxeey la shaqeeyaan Jaamacada farsamada Luleå, Jaamacada Umeå iyo isku duwayaasha waxbarashada si markaai loo soo bandhigo waxbarsho tayo sare leh iyo heerar kala duwan.
Kiruna waxa ku yaalo isbitaal, rug caafimaad, rugta caafimaadka hooyoyinka, qaabilaada dhalinyarada, rugta caafimaadka caruurta, qaabilaada degdega iyo daryeelka ilkaha. Vittangi waxaa ku taalo rug caafimaad.
Fursad lagu helo caawinaad-turjumaan waa jirtaa markii lala xariiraayo hey'addaha dowlada. Turjumaanka waxaa marka koobad laga helaa telefoon.
Sido kale xariirka-kombiyuutareed oo leh qalabka-isku xirka internetka si fiican ayuu uga dhisan yahay degmada oo dhan.
Kiruna waxay leedahay qodista macdanta dhulka hoostiisa ee ugu weyn aduunka iyo ganacsi macdanta oo ah degmadan xididkeeda nolosha. In ka badan 100 sanno ayaa macdan soo saaridda birtu ka socotay Kiruna iyadoo aanay si macno leh raad ugu yeelan qaybaha bartamaha magaalada. Sanadkii 2004 ayaa shirkadda macdanta LKAB soo bandhigta saadaasha sida muuqaalka dilaacan u gaari doono meesha iminka ah bartamaha magaalada. Taas ayaa bilow u nootay isbadalka magaalada. Macdan soo saaristan waxay aasaas u tahay nolosha ganacsi ee Kiruna oo sidaas darteed ayay Kiruna diyaar u tahay inay qaybo ah magaalada rarto maadaama macdanta birta marinkeedu uu si toos ah u hoos maro magaalada badhtamaheeda.
Inta lagu jiro sanadaha soo socda huteelo, hoy dhaqan, dhismayaal ganacsi iyo guryo ayaa ka taagmi doona xarunta cusub ee magaalada.
Xaalada dhaqaale ee sareeyso iyo badalka-magaalada waxeey keeneeysaa in hamiga laamaha kale uu kor uu kaco, goobaha ganacsiga iyo maqaayadahana asaaskooda ayaa badanooyo. Sido kale waxaa badanooyo ganacsiga-booqashada, waxaana la maalgalinooyaa ganacsiga-dalxiiska ee buuraha. Waxaa uu sii dheer in dad badan howl gab ka noqonayaan degmada gaar ahaan daryeelka, xanaaneeynta iyo iskuulada. Shaqolaantii kor uu kacsaneed weey dagtay, waana meesha ee shaqo la'aanta dalka dhan uga yar tahay.
Isla maantaba baahi loo qabo shaqaale ayaa jirto, baahidana waa badan doontaa sababtoo gobolka oo dhan kor ayuu uu socdaa taasi oo keeneeyso in shaqooyinka lagu tartamo. Si loo dabaro masruufta-shaqeeynta waxaa loo baahan yahay in uu soo guurka degmada uu bato iyo shaqaale soo galooyti oo shaqo oo yimid dalka. Jabinta macdanta iyo shaqooyinka ka soo baxo waa kuwa degmada ugu badan laakin maamulka degmada waxeey goor dheer tageeraayeen hormarinta goobta sadax meel "lug", hawada sare iyo bey'adda halkaasi ee waxbarasho iyo baaris degmada ka wado goobahaan (Esrange, IRV iyo Tarafala goobta-baarista) iyo goobta dalxiiska halkaasi ee shirkado weeyn ka asaasan yihiin (tusaale ahaan Icehotel iyo dhismo-buur). Dalxiiska iyo nadaafada waa labada goob-ganacsi ee ugu weeyn tuulooyinka.
Shaqooyinka ka banaan gudaha Kiruna